Izindaba - Ingilazi Emnene, Izinzuzo Zayo Nokubi kwayo, Nonke niyazi?
Ingilazi Emnene, Ubuhle Bayo Nobubi, Nonke niyazi?
Ingilazi omnene uhlobo ingilazi ukuphepha. Eqinisweni, futhi luhlobo lwengilazi elicindezelwe ngaphambili. Ukuze kwandiswe amandla engilazi, izindlela zamakhemikhali noma zomzimba zivame ukusetshenziselwa ukwakha ukucindezela okucindezelayo ebusweni bengilazi. Lapho ingilazi ingaphansi kwamandla wangaphandle, ukucindezela komhlaba kuqala kuqala, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe amandla wokuthwala futhi kuthuthukise ukumelana nomoya kwengilazi uqobo. Ucansi, ukubanda nokushisa, ukushaqeka njalonjalo.
Ingilazi emnene iyindlela lapho ingilazi ye-float esezingeni eliphezulu ifudunyezwa eduze nendawo yokuthambisa, futhi ingilazi ipholile ngokushesha, ukuze ukucindezela okucindezelayo kusatshalaliswe ebusweni bengilazi, kanye nengcindezi eqine isesendeni sendawo. Ngenxa yokucindezela okulinganayo okulinganayo kokucindezela, ukucindezela okweqile okwenziwa ingcindezi yangaphandle kususwa ukucindezela okunamandla kwengilazi, ngaleyo ndlela kwandise ukuphepha kwengilazi.
Ingilazi emnene inezici ezilandelayo:
1. Amandla: Amandla wokukhanda, ukumelana nomthelela namandla okugoba kwengilazi ngemuva kokufudumala kungafinyelela izikhathi ezi-4-5 kunengilazi ejwayelekile.
2. ukuzinza okushisayo kuyathuthukiswa: ingilazi emnene ingamelana nomehluko omkhulu wokushisa ngaphandle kokulimala, futhi ukumelana nokwehluka kokushisa okuguquguqukayo kuphindwe kathathu kokwengilazi ejikelezayo yobukhulu obufanayo. Ingamelana nezinguquko zokushisa zika-150 C, inomphumela omkhulu ekuvimbeleni ukuqhekeka okushisayo.
3. Ukuphepha okuthuthukisiwe: Ngemuva kokuthi ingilazi enomoya omnene yoniwe, izokhombisa ngokushesha izinhlayiya ezincane ze-obtuse-angle, ngaleyo ndlela ikhulise ukuphepha komuntu siqu. Izicelo: Ifenisha, elekthronikhi kanye nemboni kagesi, ukwakhiwa, imboni yokuhlobisa, amakamelo okugeza, izimoto, izitebhisi ezizihambelayo, nezinye izindawo lapho kudingeka khona ukuphepha nokwehla kwamazinga okushisa, futhi kungasetshenziswa njengefilimu yasekuqaleni yokuvikela ingilazi nengilazi enamapulangwe.
Ukusetshenziswa: Insimbi eflethi nengilazi emnene egobile ingeyengilazi yezokuphepha. Isetshenziswa kakhulu eminyango yokwakha ephezulu namawindi, izindonga zamakhethini engilazi, ingilazi yokwahlukanisa endlini, ukukhanyisa ophahleni, ukufinyelela ikheshi lokubuka indawo, ifenisha, izingilazi zengilazi nokunye.
Amaphutha nokushiyeka kwengilazi emnene:
1. Ngemuva kokuthi ingilazi emnene ingasakwazi ukusikwa icutshungulwe, ingilazi ingacutshungulwa kuphela kusayizi nobume obudingekayo ngaphambi kokufuthelana, bese iba nomsindo.
2. Yize amandla engilazi enomoya unamandla kunalawo engilazi ejwayelekile, ingilazi enesibindi inethuba lokuzibulala (ukuziphuka) lapho umehluko wezinga lokushisa ushintsha kakhulu, futhi ingilazi ejwayelekile ayinakho ukuthi ingaziqhumisa.
Ngemuva kokushiswa kwengilazi, amandla womshini wobuso bengilazi uphakama izikhathi ezi-3 kuye kwezingu-5 kunaleyo yengilazi ejwayelekile, kepha amakhona engilazi emnene abuthakathaka futhi angahle aqhephuke ngemuva kokutholwa amandla angaphandle. Ngaphezu kwalokho, uma izinga lokushisa langaphandle lishintsha njalo, ingilazi enomoya ungabuye uziqhume.
Impisi endala yomnyango nefasitela ikhumbuza wonke umuntu ukuthi uma usebenzisa imikhiqizo yengilazi emnene, qaphela ukuthi ungashayi emakhoneni. Kunconywa ukuthi ungenzi ukushisa kwengilazi kushintshe kakhulu esikhathini esifushane ukugwema ukuziqhuma. Ngaphezu kwalokho, ingxenye emaphakathi yengilazi enesibindi yiyona enamandla kunazo zonke, futhi amakhona amane nemiphetho kubuthakathaka kakhulu.
Uma kunesimo esiphuthumayo, ingilazi enomoya omnene ingase yephulwe futhi iphunyuke. Indlela engcono ukushaya emaphethelweni nasemakhoneni engilazi ngesando sokuphepha noma ezinye izigaxa ezibukhali, ikakhulukazi maphakathi nonqenqema olungaphezulu lwengilazi. Lapho ingilazi inemifantu, kulula ukushaya ingilazi yonke.
Isikhathi Iposi: Mar-18-2020